Muxuu Inta Badan Ka Hadlay Diego Simeone Waakan Isagoo Ka Waramaya. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Muxuu Inta Badan Ka Hadlay Diego Simeone Waakan Isagoo Ka Waramaya.
Diego Simeone ayaa ku adkeystay inuu kaliya isku dayi doono inuu dib ugu soo celiyo taageerada ficil ahaan, oo uusan aheyn ereyo ka dib maalin kale oo niyad jab leh oo uu ku qaatay Atletico Madrid.
Waxaa ku garaacay kooxda heerka seddexaad Cultural Leonesa Copa del Rey isbuucan, Atleti ayaa lagu qabtay 0-0 axada garoonkooda lugta hore ee Leganes, oo ah koox bilaabatay qeybta hoose ee LaLiga.
Iyada oo aan wax guul ah gaadhin oo ay hal gool dhalisay afartii kulan ee ugu dambeysay tartamada oo dhan, ayaa su’aalo laga keenay haddii Simeone shaki la’aan waqtigiisa uu macallinka u yahay kooxda uu soo gabagabeyn doono.
Guuldarooyinka ka soo gaara kulanka Real Madrid ee sabtida soo socda waxa kaliya ay sii xoojin doonaan baaqa loogu yeerayo tababaraha inuu baxo, laakiin Simeone ayaa ka go’an inuu muujiyo inuu badin karo Atleti xilli ciyaareedka.
“Waxba kama dhihi karo dadka [kuwa aan aaminka aheyn],” ayuu u sheegay suxufiyiinta. “Waxa kaliya ee aan sameyn karo waa inaan ku tusiyo ficil ahaan, maahan ereyo. Erayadu micnaheedu maahan waxba.
Waan ixtiraamayaa qof walba Waa la ii cadeeyay sababtoo ah si fiican ugama fiicneyn mustaqbalkeygii labaad ee kooxda [ciyaartoy ahaan]. Taageerayaashu aad ayey muhim u yihiin marka kooxdu aysan guuleysan. Aniga ayay aniga ila tahay inaan xal helo in taas.
“Waxa ugu horreeya ee aan u baahan nahay inaan sameyno waa inaan shaqo ku noqonno. Intaa ka dib, waxaan go’aankeyna ku gaari doonaa waxaan u maleynayaa inay ugu fiican tahay kooxda. Waxaan heysanaa hal usbuuc oo aan ku soo laabanno nabadda iyo xasilloonida, taas oo ah wax aad u baahan tahay kubada cagta.
“Waxaan heystaa koox weyn, waxaana la rajeynayaa in tiro ka mid ah ciyaartooyda ay ka soo laabtaan dhaawicii isbuucaan. Sabtida, waxaan ku bixi doonaa rajadii aan ku badin laheyn ciyaarta.”
Simeone ayaa diiday inuu dhaleeceeyo taageerayaasha Wanda Metropolitano taageerayaashooda axadii wuxuuna carabka ku adkeeyay Atleti inay ku guuleysan laheyd ciyaarta hadii ay soo bandhigaan natiijo dheeri ah qeybta labaad.
Wuxuu yidhi: “Dadwaynuhu way ku soo jiitaan, way ku lug lahaadaan oo qaybtooda ka qaataan dhiirrigelinta kooxda,” ayuu yidhi. “Waxaan kaliya ku ciyaarnay meel ka baxsan garoonkeena oo aan sifiican u rogin taageerayaasheena aad ayey u fiicnaayeen maanta.
Waxaa taageeray Mashruuca Rubicon “Maalmaha kale, waxaad si fudud u soo afjari kartaa guuldarooyinka sidan oo kale ah. Waan ku guuleysan karnay ciyaarta qeybtii labaad.”
Kooxda Arsenal Ayaa Wada Qorshe Ay Ku Xalin Doonto Dhibaatooyinka Ka Haysta Dhanka Difaaca Kooxda Oo Marmar Khashifmay?